Isicelo se-1Password sihlaziywa ukuba sibe yindalo kwi-Apple Watch | IPhone iindaba
Esi sicelo esinokusihlela namhlanje njengenye yezona zinto zibalulekileyo kwizixhobo zethu ze-iOS, sele ihlaziywa nje kuhlobo lwe-6.5 ukongeza usetyenziso lwendalo kwi-Apple Watch. Kule meko, eyona nto igqame kakhulu malunga nenguqulelo entsha kukuba Ngoku abasebenzisi abane-Apple Watch banokufikelela kwiiphasiwedi kunye nenye idatha egcinwe kwisicelo ngokuthe ngqo kwisandla saboNgale ndlela, ukuqala iseshoni kuya kukhawuleza kumgaqo, kodwa oku kufuna indlela ethile yokusetyenziswa, ke makhe sibone ukuba isebenza njani nohlaziyo olutsha.
Sebenzisa i-1Password kwewotshi
Into yokuqala ekufuneka siyenzile xa sikhuphela ingxelo entsha ye-1Password application yile ukufikelela ngqo kwisicelo esinaso kwi-iPhone yethu ye-Apple Watch, Jonga. Kuyo into esiza kuyenza kukuhla de sifumane isicelo esikhutshiweyo kwaye Thepha kwi-Apple Watch. Isicelo siza kufakwa kwaye ngoku sinokuyisebenzisa kwiwotshi yethu ebukekayo.
Ukuze le nto iqale ukusebenza, le nkqubo iquka ukungena kwi-Apple Watch yethu kwaye oku kufuneka sibe negama lokugqitha eligcinwe kwi-iPhone ngaphambili, nokuba ikwiwebhusayithi, inkonzo okanye okufanayo, singena kwisicelo ukusuka kwewotshi kunye nokufikelela kufuna ukuvula i-iPhone ngeminwe, ke ngekhe sibe neengxaki zokhuseleko. Iya kuvulwa ngokuzenzekelayo kwi-iPhone. Amanyathelo alula, khetha ukuqala kwiapp yeApple Watch kwaye usebenzise isivamvo somnwe ukuqala iseshoni, ilungile.
Isicelo sendalo seewotshi asisebenzi ngokwenyani njengoko besinethemba, kwimeko yam ndiye ndaneengxaki zokuvalwa okungalindelekanga ngaphambi kokuba ndikwazi ukusebenzisa oko akuthethi ukuba kuyenzeka kubo bonke abasebenzisi. Insiza entsha yeApple Watch kufuneka ikhuseleke kwaye isebenze kuzo zonke iimeko ukusukela xa sithetha ngeekhowudi zokufikelela, amakhadi kunye namanye amagama agqithisiweyo, kufuneka sizole malunga nokusilela nokunye okunje, kwimeko yam ivaliwe ngokungalindelekanga a Amaxesha ambalwa, oko akuthethi ukuba kuyenzeka kuye wonke umntu. Ngaba ukhe wayisebenzisa kwiwotshi yakho?
1Password-Umphathi wegama eligqithisiweyoMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Uhlelo lokusebenza lwegama elingu-1 lihlaziywa ukuze luvele kwi-Apple Watch
Ngaba ungachaza inyathelo ngenyathelo ukuba ungayenza njani, ndifumana umfanekiso wesibini owubekayo kwaye uhlala apho
I-Valentine elungileyo, olu khetho kwi-Apple Watch luvulwe ngokuthengwa kweapp epheleleyo. Jonga oku ngokufikelela kuseto lwegama elingu-1.
Enkosi ngokuphendula, uguqulelo endinalo luphelele
Imaginbank neMarca bafumana olona hlaziyo lukhulu kwixesha elide